🥇 ▷ Ma iibsatay Huawei P30 Pro? Hadda xitaa si ka sii qiimo badan! ✅
Ma iibsatay Huawei P30 Pro? Hadda xitaa si ka sii qiimo badan!
Sanadkii la soo dhaafay, Huawei P20 Pro waxaa loo tixgeliyey taleefanka casriga ah ee ugu fiican Yurub ee EISA (Khabiirada Sawirka iyo Ururka Sahanka). Daabacaadda abaalmarinta sanadkan ayaa la shaaciyey. La yaab maahan, Huawei P30 Pro ayaa dib ugu soo laabatay sida taleefanka gacanta ee ugu fiican. Sidaad ogtahay, P30 Pro waa kan ku xiga P20 Pro. Marka lagu daro P30 Pro, waxaa jira guuleystayaal kale oo ay tahay in la muujiyo. Tani waxaa ku jira sharaf 20 Pro, OnePlus 7 Pro iyo Redmi Note 7. Guusha waxaa doortay 61 khabiir oo joornaalada teknolojiyadda ka ah 29 dal oo adduunka ah.
Shaki kuma jiro in Huawei P30 Pro uu yahay qalab sifiican uga koreeya celceliska. Ilaa hadda, kamaradaha P30 Pro ayaa ugu fiican marka loo eego DXOMark. Inkasta oo aysan ku sii jirin booska ugu sarreeya, waxay ku sii jirtaa meesha ugu sarreysa 3. Ka sokow kamaradda, P30 Pro ayaa sidoo kale bixisa astaamaha ugu wanaagsan!
Waxaad ka aqrisan kartaa dib u eegisteena Huawei P30 Pro halkan.
Xaqiiqdii, abaalmarintan ayaa ah xaqiijin ku saabsan awooda Huawei ee xagga naqshadeynta iyo shaqooyinka garoonka dhexdiisa. casriga. Mudane 20 Pro ayaa sidoo kale lasiiyay taleefanka casriga ah ee ugu wanaagsan. Sharafta 20 Pro waxaa laga yaabaa inaysan noqon dhamaadka saxda ah ee saxda ah, laakiin waxay ku timaadaa dhammeystir galaas 3D oo cajiib ah.
OnePlus 7 Pro maaha wax la yaab leh liiskan. Xaqiiqdii, waxay leedahay wax walba oo taleefanka casriga ah uu u baahan yahay inuu noqdo nooca ugufiican. Tusaale ahaan waa “chipsdragon 855 chipset”, ilaa 12 GB Ram iyo kaydinta UFS 3.0. Sidoo kale xusid mudan ayaa ah shaashad balaaran oo qaloocsan. Wax ka yar xiisaha ayaa ah kamarada soosaara.
Toddobaadkiiba Redmi note
Si kastaba ha noqotee, guuleyste kale oo lama filaan ah, ama malaha maya, waa Redmi. Xusuusin 7. Waxaan ku tijaabinay Leak waana runtii waan ku raaxaysanay. Sidaas oo kale, qalabkani wuxuu ku guuleystay abaalmarinta “ugu wanaagsan ee iibsashada”. Tan waxaa u sabab ah tiro badan oo faahfaahinta wanaagsan, sida ‘Snapdragon 660 chipset’, kamarad 48MP, iyo batteriga. 4,000 mAh.
Dhammaan abaalmarinnada waxaa lagu soo bandhigi doonaa inta lagu gudajiro xafladda ka dhici doonta IFA Berlin.